မမလို့သာ ခေါ်လိုက် သိပ်လှ တဲ့ သဘာဝ တရားတွေ မောင်လေးတွေကို လိုက်ပြပြီးသားပဲ. ဆိုတဲ့ သဇင်ဦး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မမလို့သာ ခေါ်လိုက် သိပ်လှ တဲ့ သဘာဝ တရားတွေ မောင်လေးတွေကို လိုက်ပြပြီးသားပဲ. ဆိုတဲ့ သဇင်ဦး
မမလို့သာ ခေါ်လိုက် သိပ်လှ တဲ့ သဘာဝ တရားတွေ မောင်လေးတွေကို လိုက်ပြပြီးသားပဲ. ဆိုတဲ့ သဇင်ဦး
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စားအလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေများပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ သဇင်ဦးတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန် းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သြယ္လ်တဲ့ အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဆက္ဆီ သဇင္ဦးကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ဆြဲမက္ဖြယ္ရင္သပ္ရႈေမာစရာ အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ပုရိသေတြရဲ႕ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူထားတဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အတူ လွပၾကည္လင္တဲ့ အသားအေရကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီက်တဲ့ သူမရဲ႕ အမိုက္စားပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ အမိုက္စားပုံရိပ္နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ဗီဒီယိုေလးေတြကို လူမႈကြန္ ယက္ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးတင္ေလ့ရွိတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ သူမ ရဲ႕ အမိုက္စားအလွတရားေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူဖမ္းစားထားတဲ့ အလန္းစား ပုံေလးကိုေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပုံေလးဟာ ၾကည့္ရႈသူေတြမ်ားျပား ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပုရိသေတြအမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္းခံေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပုံေလးထဲမွာ သဇင္ဦးတစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈမႈရွိရွိနဲ႔ လွရက္လြန္ းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္အလွကေတာ့ ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူဖမ္းစားေနတာအမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း သဇင္ဦး ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံေလးကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post ကမ္ဘာ့ အလှမယ်တွေ ကြားမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှု ခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင် ရဲ့ ကြည့်မဝနိုင်တဲ့ အလှတရား
Next post စတိုင် ကျကျ အမိစား ပိုစ့်တွေ ပေးနေ တဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်